Jekiseni Zvigadzirwa vagadziri uye vatengesi - China Jekiseni Zvigadzirwa Factory
Kukanganisa Meter Meter
Yakatarisana kumeso Pallet
Pallets ane zvirevo zviviri. Yekutanga: Pallets ndiwo mazwi anoshandiswa mumaindasitiri ekutakura uye ekushandisa. Dzinoreva zvinhu zvinounzwa kunze kwenyika mugungwa kana nemhepo kana zvifambiso zvakasanganiswa zviri mumaoko evaridzi vedzimba. Ndiko kubvunza muridzi wenhumbi. Wese muridzi wezvinhu anoda kubvunza kanopfuura kamwe chete pane chimwe nechimwe chinodikanwa chekushandira zvinhu. Mutengo uri nani kupfuura matatu. Naizvozvo, pasi pechinyakare bhizinesi ficha, pane hombe nhamba yemapallet. Rudzi rwechipiri: Pallets, a ...
Iyo yekumashure-yakaturikwa zvikamu bhokisi inonyanya kugadzirwa neco-polypropylene nejekiseni kuumbwa, ine yakanaka michini simba, kurema uremu, hupenyu hurefu hwebasa uye nyore kushandisa. Haisi kungoshandiswa chete pamwe chete nemashefu akareruka uye makabati ekuchengetera, asi zvakare inoshandiswa pamwe chete nezvinhu zvekurongedza racks, mabhenji ekushanda ane akarembera mabhodhi, akarembera bhodhi madziro makabati uye zvimwe zvishandiso zvekushandira zvine louver yakarembera mabhodhi. Iko kuomarara kwakasimba kwenzira yadzo yekushandisa kunokubatsira zvechokwadi Kuchengetedza nzvimbo uye kudzikisa ...
Iyo tangi inogona kuva mudziyo wekuchengetera marara, ane basa rakafanana nere marara, uye kazhinji akaenzana kana akaenzana. Yekushambadza-mhando marara anogona inogona kufarirwa. Inowanzo shandiswa munharaunda, mapaki nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji. Tsvina inogona kukura kuva mhando nyowani yehungwaru inoshuvira marara anogona. Chakavanzika ndechekuti kune mugero wepasi pevhu uye pneumatic muchina uri pasi pega marara anogona munharaunda, kungofanana nepombi yemvura, pasi pekuita kwemuchina wemweya. Aut ...
Double -deck Chikamu Zita: Double-deck pallet D4-1111 Nhamba: KH170384 Chikamu chesayizi: 1100 * 1100 * 140 mm Chikamu uremu: 19.28kg Pallet Chikamu Chikamu Pallet yakasimba kwazvo pakutsiga, simba rinoshanduka, simba repasi repasi, kudonhedza kona , avhareji mutoro simba etc. Pallet Dolly mubatanidzwa Pallet Lid Kurema kunodzikira kudikanwa kuchikonzera kuwanda uye kwakawanda kuita seMucell. Kaihua Technology Pallet muforoma dhizaini uye kugadzira Chikamu dhizaini / CAE kuongorora / Kuyerera kuyerera kuongorora Mucell maitiro Pallet Mutoro Iva ...
Huru maindasitiri Crate (5 vhezheni)
Huru maindasitiri Crate (5 vhezheni) Chikamu saizi: 1200 X 1000 X 731mm 1200 X 1000 X 821mm 1200 X 1000 X 547mm Mould Kukura: 2560x2130x1560mm Chikamu uremu: 19.28kg Pallet Chikamu Chikamu Pallet chakasimba kwazvo kurongedza, simba rinoshanduka, ndiro repasi simba, kona kudonha, avhareji mutoro simba etc. Pallet Dolly mubatanidzwa Pallet Lid Kurema kunodzikira kudikanwa kuchikonzera kuwedzera uye kuita kwakawanda seMucell. Kaihua Technology Pallet muforoma dhizaini uye gadzira Chikamu dhizaini / CAE kuongorora / Mould kuyerera kunoongorora ...
Mazambiringa Kupeta Tote
Mazambiringa Kupeta Tote Chikamu Zita: Grape kupeta tote Mould saizi: 1790X1090X1057 mm Mold huremu: 11Ton Chikamu saizi: 710X953X26 mm Chikamu uremu: 650g Pallet Chikamu Chikamu Pallet chakasimba kwazvo pakuvhara, simba rinoshanduka, iyo yepasi ndiro simba, kona kudonha, wepakati mutoro simba etc. Pallet Dolly mubatanidzwa Pallet Lid Kurema kunodzikira kudikanwa kuchikonzera kuwedzera uye kuita kwakawanda seMucell. Kaihua Technology Pallet muforoma dhizaini uye gadzira Chikamu dhizaini / CAE kuongorora / Kuyerera kuyerera kuongorora Muce ...